Nagu saabsan - Erbo (Xiamen) Technology Co., Ltd.
Erbo (Xiamen) Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2020 iyadoo la diiwaan galiyay caasimada 20 milyan RMB. Waxaan nahay soo saaraha wax soo saarka caag xirfadeed iskudhafka R & D, design, wax soo saarka iyo iibka. Waxay ku yaalliin jawiga quruxda badan ee magaalada Xiamen, oo loo yaqaan "Beerta Badda", Xiamen maahan oo keliya aag dhaqaale oo gaar ah, laakiin sidoo kale waxay leedahay gaadiid badeed aad u habboon, oo door muhiim ah ka qaata gaadiidka badeecadaha iyo horumarinta dhaqaalaha meelo kala duwan. waxayna damaanad qaadi kartaa xawaaraha bixinta.
Sannad ka dib oo horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo ka dib, Erbo Technology wuxuu noqday soo saaraha ugu horreeya ee wax soo saarka wax taaj oo kale dharbaaxo ee Shiinaha. In berrinkii wax soo saarka wax taaj oo kale wax taaj oo kale, shirkadda our ayaa aasaasay ay faa'iidada farsamada keentay.
Teknolojiyada Erbo waxay leedahay dhowr nooc oo khadadka wax soo saarka wax taaj oo kale ah oo balaaran, inta badan waxay ku hawlan yihiin alaabooyinka wax lagu duubo oo dharbaaxo ah sida sabayn, sabaayad, qalabka gaadiidka, baalashka gaadiidka, alaabta balaastigga ah, weelasha wax taaj oo kale ah, weelka godadka ah, sanaadiiqda qalabka, iwm. wuxuu ku takhasusay soo saarida badeecooyin kala duwan oo balaastig ah wuxuuna leeyahay sannado badan oo waayo-aragnimo maarayn farsamo xirfadeed ah soo-saarka qalabka wax-u-qabashada wax-soo-saarka wax-soo-saarka, qaabeynta wax soo saarka, waxsoosaarka caaryada, iyo wax-soo-saarka dhammeystirka wax-soo-saarka. Waxyaalaha wax lagu duubo ee afuufka ah waxaa lagu soo saaraa iyadoo la isticmaalayo cusbi-cufan-cufan oo aad u sarreeya sida walxo ceeriin ah, iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad wax lagu karsado oo heer sare ah Waxay leedahay faa'iidooyinka miisaanka fudud, awoodda saameynta sare leh, iska caabbinta daxalka, adkeysiga, awoodda qaadista ballaaran, iyo siibiq la’aanta.
Tiknoolajiyada Erbo waxay leedahay koox maareyn tayo sare leh iyo xoog saynis iyo farsamo xoog leh.Erbo Technology ayaa soo martay shahaadada CE, shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO 9001, shahaadada nidaamka maareynta deegaanka ee ISO 14001, iyo nidaamka ISO 45001 shaqada caafimaadka iyo maamulka amniga.
Tan iyo aasaaskeedii, waxay had iyo jeer hirgelisay siyaasadda ganacsiga iyo falsafadda dhaqanka ee "hoggaanka teknolojiyadda, u janjeedha dadka, maareynta cilmiga, tayada ugu horreysa, iyo adeegga ugu fiican". Ma jiro wax fiican, kaliya ayaa ka fiican. Waxaan sii wadi doonnaa inaan horumarino maaraynta gudaha iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed si loo abuuro wax soo saar tayo fiican leh oo adkeysi badan. "Aaminaaddu waxay ka timaaddaa tayada", waxaan sii wadi doonnaa hagaajinta tayada wax soo saarka, hagaajinta adeegyada farsamada, iyo inaan si fiican ula kulanno baahida macaamiisha. Baahida macmiilku waa dhiirrigelintayada. Siinta macaamiisha wax soo saar tayo sare leh oo ka sareeya waa hadafkeena! Aynu gacmaha la qabsanno macaamiisha gudaha iyo dibaddaba si aan berri ugu wanaagsan ugu abuurno warshadaha waxyeellada waxyeellada leh!